ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: ထိုင်းနိုင်ငံနေ အလွဲများ
မှန်းတုတ် ရမ်းလုပ်ထည့်တာတွေက မမှန်သွားတဲ့ ရယ်စရာ အမောလေးတွေဆက် ဖတ်ချင်ပါသည်
:D.. ပုလိပ်တွေ ပြန်လှည့်လာလို့ အိမ်ပေါ်တက်ပြေးပုံလေး မျက်လုံးထဲကို တန်းကနဲ ၀င်လာပါ၏.... :D
ပို့စ်လေးက မြူးလိုက်တာ ညီရေ...၊ တလျှောက်လုံး ထိုင်ရယ်နေမိတယ်၊ အလုပ်မှာ ဒေတာတွေ တွက်နေရင်း ဖတ်နေတာဆိုတော့ ဘေးက အလုပ်ဖော်က မင်းဒေတာတွေက တော်တော်ရယ်ရပုံပဲ တဲ့၊းD ဘယ်စကားပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ၊ တတ်ချင်ရင်တော့ ရှက်နေလို့ မရဘူး၊ ရဲရဲတင်းတင်းပြောလို့ မှားသည့်တိုင် လူတွေက ချစ်စနိုးနဲ့ ရယ်တာများပါတယ်၊ ပြီးတော့ သူသိပ်တတ်ချင်ပုံရတယ်-ဆိုပြီး စေတနာနဲ့ သင်ပေးလေ့ ရှိပါတယ်၊ နောက်ထပ်အလွဲတွေ ကျန်နေဦးမယ်လို့ ထင်တယ်၊ အဆင်ပြေရင် ၂ တို့၊ ၃ တို့ ဆက်ပါဦး...။း)
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ထိုင်းစကားက နားထောင်လို့တော့ကောင်းပါတယ်၊အဲဒီ မှာ ဗမာစကားတတ်တဲ့ ထိုင်းဆိုတဲ့သူတွေက မြန်မာရှမ်းတွေဖြစ်ဖို့ များတယ်။ စင်္ကာပူမှာလဲတွေ့ဘူးတယ်၊ သူတို့က မြန်မာပြည် တောင်ကြီးသူတွေ ၊ passport ကတော့ ထိုင်း p.p ဗျား။
ဘာဘဲပြောပြော အစ်ကိုထိုင်းစကားသင်တဲ့ပုံစံလေးအတုခိုးပြီး တရုတ်စကားသင်ရမယ်။း(
သင်သာသင်နေတာ ပြောရမှာရှက်တော့ ခုထိလည်း မပြောတတ်ဘူး.။ နားဘဲနားလည်တယ်။း(
ခပ်သာ ခပ်ပါ...။ မကြောက်ပါနဲ့...။ အမက ထိုင်းစကားပြောကို intermediate ထိ တက်ပြီးပြီ မသုံးတော့ ခု မေ့ကုန်ပြီဟ၊ ထိုင်းစကားပြော ဘာကြောင့်သင်လဲ ဆိုတော့ကာ ပီဘာ့ဒ် P-Birdကို ချစ်လို့...ဟဟဟဟ :))
ကျနော်လည်း စရောက်ကာစက ဈေးဝယ်ရင် ဖြစ်နိင်တဲ့ ဈေးနှုန်းထက် ပိုများတဲ့ငွေစက္ကူပေးလိုက်တာပဲ သူပြန်အမ်းတာကိုကြည့်ပြီး ဘယ်ဈေးဆိုတာ မှတ်ရတယ်။ ကိုယ့်နိင်ငံမဟုတ်တော့လည်း အခက်အခဲ ပေါင်းစုံကြုံရတာပါပဲ။
အလွဲလေးတွေ ဖတ်ပြီး ပြုံးသွားတယ်။ အစ်ကိုရေ။ ခပ်လည်း ခပ်သွားတယ်။
လူရှင်းတုန်း ခပ်ထည့်သွားတယ် ...ခပ် - ခပ်- ခပ် ...ဆိုင်ကယ်နဲ့ ပြန်လိုက်ပို့ ပါ ... :)
မချစ်ကော်မန့်ဖတ်ပြီး စပိန်စကားသင်ချင်ခဲ့တာကို သတိရလိုက်မိသေး
ရီးရဲက ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ကို သဘောကျလို့လေ ခိခိ
မောင်မျိုးရဲ့ အလွဲလေးတွေက ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရယ်စရာမို့ ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်။ လွဲတဲ့သူသာ မသက်သာရှိရမယ် ဖတ်တဲ့သူတော့ ကောင်းမှကောင်း
နောက်လွဲတာတွေရှိရင် လုပ်ပါဦးး)
ရီလိုက်ရတာ အသံတောင်ထွက်ကျသွားတယ်...။ လွဲတာတော့ လူတိုင်းပါပဲ...။ ငါလဲလွဲတယ်..။ ထမင်းဆိုင်မှာ ပါဆယ် သွားဝယ်တာ ရောက်ခါစတုန်းက.. ဆိုင်မှာ စားရတာ.. မလွတ်လပ်တော့ ပါဆယ် ၀ယ်မယ့်ပေါ့...။ ကိုယ်သိတာက ဆ၀ါဒီခပ်နဲ့ခေါ့ခွန်းခပ်ပဲ။ အဲ့သာ ဆိုင်ရှင်ကမေးတာက “ဒီမှာစားမှာလား” ဆိုင်ကျန်း (အတိအကျမသိ) ဆိုတော့ ငါက ခပ်ပေါ့။ သူက ထပ်မေးတယ် “ပါဆယ်လား” ဆိုင်ထို (အတိအကျမသိပါ) ဆိုတော့ လဲ ငါက ခပ်ပဲ။ သူထပ်မေးတယ်။ ငါကလဲ ခပ်တယ်..။ အဲ့မှာ မေးရင်း ခပ်ရင်းနဲ့ဆိုင်ရှင်ခေါင်းကုတ်ပြီး ပါဆယ်ပလတ်စတစ်ဗူးကို လက်ညိုးထိုးပြောတော့ ငါ ခပ် လိုက်တော့မှပဲ... သူက အော... “ဆိုင်ထို” ပါဆယ်ထုတ်မှာပဲ ဆိုပြီး ၀ိုင်းရယ်ကြတယ်.. ။ ရှက်ထှာ။
ဒါမယ့်နောက်များကျတော့လည်း ကိုယ်စားချင်တာ စားတတ်အောင်တော့ နဲနဲလေ့လာရတော့တာပေါ့လေ။ ခုထိလဲ မတတ်သေးပါဘူး။
ဟေးးး ဆာဝါးဒီးးခပ် ခပ် အသေခပ် ပိုးစိုးပက်စက်ခပ် အသေအလဲ ခပ် . ခပ်ချင်သလောက်ခပ်း))
ဟားဟားဟား ဆော်ဝါဒီးခပ် ပါ ညီရေး))
ဆဝါဒီခါးးး ယင်ဒီထိဒိုက်ရူးကျက်ခါး.. :)
ထိုင်းစကားသင်နေတဲ့သူအချင်းချင်း လာနှုတ်ဆက်တာပါ. :P ဘလော့မှာတော့ ပို့စ်အသစ်တင်တိုင်း လာဖတ်ပါတယ်. ခြေရာမချန်ဖြစ်ခဲ့ဖူး. ကိုယ့်အကြောင်းတွေကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဟာသစွက်ရေးတတ်တဲ့ ဘလော့ဂါတယောက်အနေနဲ့ စိတ်ထဲက ခင်မင်နေမိတယ်.. အခုတော့ ထိုင်းစကားအလွဲတွေအကြောင်း ရေးထားတာ ဖတ်မိတော့ ကိုယ်ထင်လာပြတာ :) .. ဖေ့ဘွတ်မှာ ဓာတ်ပုံမြင်ဖူးနေတော့ ဒီကိုအလည်ရောက်နေတုန်း တွေ့ဖြစ်မလားလို့ လမ်းထွက်ပြီးဆိုင်ကယ်စီးရင် ရှာကြည့်သေးတယ်.. တွေ့ရင် လှမ်းနှုတ်ဆက်မယ်လေ နော့ :)
ထိုင်းကို ရောက်ခဲ့တာလေးတောင် ပြန်လည် သတိရ သွားမိတယ်။ :):)
ထိုင်းစကားလေးတွေ သိသလောက် ရေးပေးပါအုံးနော်။
မောင်မျိုးကမှ အမထက်စာရင် အများကြီးတော်ပါသေးတယ်... အမဆို ဒီမှာနေပြီး ခုထိ ၁ ၂ ၃ ၄တောင် တရုတ်လိုမတတ်သေးဘူး...ခုသားတရုတ်စာ စာမေးပွဲရှိမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နောင်တရမိတယ်...